ShazamKit dia mamela ny mpamorona hampiditra an'i Shazam amin'ny fampiharana azy ireo | Vaovao IPhone
ShazamKit dia mamela ny mpamorona hampiditra an'i Shazam amin'ny fampiharana azy ireo
Iray amin'ireo fahombiazana lehibe indrindra amin'ny lafiny fampiharana dia tsy isalasalana fa Shazam. Ity fampiharana ity dia ahafahanao mamantatra izay hira heno amin'ny alàlan'ny fanoratana sombintsombiny kely fotsiny na dia misy tabataba any ambadika aza. Izany dia tratra noho ny teknolojia fampitahana eo amin'ny katalaogy lehibe misy hira an-tapitrisany. Tamin'ny taona 2017 dia nividy ilay orinasa i Apple ary nanomboka teo dia nampifangaro ny haitao rehetra ao anatin'ireo rafitra fiasa. Tonga izao ny fotoana hitondrana azy mihoatra ny iOS sy iPadOS amin'ny alàlan'ny fandefasana ny kit fampandrosoana ShazamKit, izay mamela ny mpamorona ampiharo ny teknolojia ao anatin'ny fampiharana anao, na dia amin'ireo developer Android aza.
Apple dia namorona kit fampandrosoana mba hahafantarana ny mozika: ShazamKit
Mamolavola fiasa amin'ny rindranasao amin'ny alàlan'ny fanekena mozika ary ampifandraiso am-pilaminana ireo mpampiasa miaraka amin'ny katalaogin'i Shazam. ShazamKit dia ahafahanao mampanan-karena ny traikefanao amin'ny alàlan'ny famelana ny mpampiasa hahafantatra ny anaran'ny hira iray, iza no nihira azy, karazana ary maro hafa. Ianaro hoe aiza no nahitana ilay lalao tao amin'ilay hira handrindrana ny atiny amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa.
Este kit fampandrosoana Tsy ny momba an'i Shazam fotsiny sy ny fanekena mozika akory. Mbola lavitra lavitra kokoa izany: dia hitondra ny haitao izay ampiasain'i Shazam ho an'ny fampiharana developer. Raha atao teny hafa, ny mpamorona dia afaka mamorona tranombokim-peo ho azy manokana ary mampiditra azy ireo ao anaty rafitra toa an'i Shazam. Mba hahafantarana ny zavatra niainan'ireo fampiharana nataonao.
Ho fanampin'izay, tsy ilaina ny mozika alefa any ivelany ary hampiasa ny mikrofon'ilay fitaovana handraisana azy, fa kosa azo soratana eo an-toerana, fivoarana napetrak'i Apple amin'ny kinova farany amin'ny rafitra fiasa.
Miaraka amin'ity fanodikodinam-bola be ity avy amin'ny kitapo ShazamKit, Apple dia mamita ny dia lavitra amin'ny fanamafisana orina ny teknolojia amin'ny teknolojia izay mitentina 400 tapitrisa dolara mahery ny Big Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » ShazamKit dia mamela ny mpamorona hampiditra an'i Shazam amin'ny fampiharana azy ireo
Deezer dia nanamboatra endrika ny app Deezer for Creators, fitaovana fanadihadiana ho an'ny mpitendry sy podcasters
Frenzic: Overtime dia lalao ankamantatra izay hita ao amin'ny Apple Arcade ankehitriny